Autoroute « Antananarivo – Toamasina » : « Nifarana ny fitsirihana teknika nataon’ny Sinoa » -
AccueilSosialyAutoroute « Antananarivo – Toamasina » : « Nifarana ny fitsirihana teknika nataon’ny Sinoa »
Autoroute « Antananarivo – Toamasina » : « Nifarana ny fitsirihana teknika nataon’ny Sinoa »
21/02/2017 admintriatra Sosialy 0
Anisan’ny tetikasa goavana ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Asa Vaventy ny fanamboarana ilay lalam-be migodana na “autoroute” mampitohy an’Antananarivo amin’ny Toamasina. “Efa an-dalam-pahavitana, izay vinavinaina ho amin’ny faran’ny volana Marsa izao, ny fitsirihana io “autoroute” io ka ny kabinetram-pitsirihan’ny governemanta Sinoa no misahana izany”, hoy ny minisitry ny Asa Vaventy, Eric Razafimandimby. Resadresaka…
Gazety Triatra (+): Andriamatoa Minisitra, manao ahoana ny mahakasika ny famatsiam-bola eo anivon’ny minisiteran’ny Asa Vaventy izay tantaninao?
Minisitry ny Asa Vaventy (-): Marihina ary tsara ho fantatra fa mizara telo miavaka tsara ny famatsiam-bola eto anivon’ny minisitera. Voalohany amin’izany ny FER na ny “Fonds d’entretien routier”, izay ireo orinasan-tsolika no mandoa izany. Eo koa ny famatsiam-bola anatiny, izay avy amin’ny teti-bolam-panjakana, ary farany ny famatsiam-bola avy any ivelany. Mazava ho azy, araka izany, fa miainga avy amin’ireo famatsiam-bola ireo no ahafahan’ny minisitera manatanteraka ireo asa rehetra sahaniny.
(+) Manao ahoana indray ny fomba fampiasa ireo famatsiam-bola ireo eo anivon’ny minisiteran’ny Asa Vaventy?
(-) Ho an’ny FER manokana aloha, somary latsaka ny tamin’ity taona ity raha mihoatra tamin’ireo taona nifanesy tany aloha. Misy olana ihany koa izy io ankehitriny satria tao anatin’ny efa-taona ngarangidina dia mbola tsy voaloan’ireo orinasan-tsolika ny FER. Izany hoe, mitentina 300 miliara Ariary no trosan’ireo orinasan-tsolika amin’izao fotoana izao ka tsy ahafahan’ny minisitera manatanteraka ny fanatsarana sy fikojana ireo lalam-pirenena. Ankoatra izay, tafiditra ao anatin’ny FER ihany koa ny FER – CTD na ilay vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Mahazo amin’io avokoa ireo Faritra 22. Manodidina ny 60 miliara Ariary eo kosa ny teti-bola amin’ny fanamboaran-dalana izay hotsinjaraina amin’ireo Faritra 22. Mikasikasika ny famatsiana anatiny indray, avy amin’ny teti-bolam-panjakana iny ka hampihodinana ny raharaha eo anivon’ny minisitera sy ireo asa tena maika. Ary farany, ilay famatsiana avy any ivelany, efa nahazo izany isika tamin’ilay 11è Fed, izay manodidina ny 200 tapitrisa Euros izay nahafahana nanamboatra ireo lalana Vangaindrano – Fort-Dauphin, ny RN13, Ambanja – Antsiranana, Ambilobe – Vohémar. Etsy andaniny, ilay vola azo tamin’ny Fihaonambe iraisam-pirenen’ireo mpamatsy vola (CBI) izay mitentina 10 miliara Dolara. Efa misy rafitra napetraka eny anivon’ny Prezidansa mikasika izany ka misahana ny fifampiresahana amin’ireo mpamatsy vola. Mbola tsy voafaritra mazava kosa anefa io vola azo tamin’ny CBI io satria miankina amin’ny toromariky ny Filoham-pirenena izany.
(+) Araka ny efa fantatra, andriamatoa Minisitra, hisy an’ilay antsoina hoe “autoroute” na lalam-be migodana eto Madagasikara, azonao hazavaina indray ny mahakasika azy io?
(-) Eny, raha ny mahakasika azy io indray, mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina io fotodrafitrasa goavana io. Ny kabinetra fitsirihana avy amin’ny governemanta Sinoa no manao ny fitsirihana amin’ny fanatanterahana ny asam-panamboarana. Tokony ho vita ato ho ato, any amin’ny faran’ny volana Marsa any io fitsirihana io. Mety hiova anefa izany, arakaraka ny fivoahany eo. Vita izay dia miroso amin’ny fifandresen-dahatra mikasika ny ara-bola. Ankoatra izay, manana modely amin’io “autoroute” io ny Sinoa saingy jerena hoe mba tsy ho lafo loatra ny vidiny. Hezahina ho ao anatin’ny 20 taona kosa ny hamerenana ny vidin’ny famatsiana. Zava-dehibe ho an’ny firenena ny fananana “autoroute”. Voalohany aloha, mihena ny halaviran-dalana satria raha 360 km ny halavirana Antananarivo – Toamasina, hihena ho 240 km izany. Eo koa ny tetikasa ara-pizahantany, ara-toekarena, sns. Mampitombo ny vola miditra ihany koa.
(+) Ankoatra izay, manao ahoana indray ireo tetikasa eo amin’ireo fotodrafitrasa isan-tokony, indrindra eo amin’ny fanamboaran-dalana?
(-) Maro dia maro ny tetikasa eo amin’ny fotodrafitrasa. Anisan’izany ny fitsirihana ny tetezan’i Manakara Be, izay tena mampirisika ny fitondram-panjakana sy ireo mpamatsy vola. Tafiditra indrindra amin’ny toromariky ny Filoham-pirenena ny famerenana io tetezan’i Manakara Be io. Toraka izany koa ny Route de la Pomme any Antsirabe amin’iny Lalam-pirenena fahafito (RN7) iny. Ny RN 44 koa efa mandeha ny fanamboarana, izay efa misy mpamatsy vola handray izany. Etsy andaniny, ny fanamboarana tanteraka ireo tetezana simba sy marefo rehetra amin’ny RN7 manomboka eo Antsirabe hatrany Toliara. Hisy koa ny fanamboaran-dalana amin’ny renivohi-paritany rehetra. Ireo rehetra ireo anefa tafiditra amin’ny PPP (Partenariat Public-Privé) saingy mbola hifampiresahana izany. Isika mantsy somary tara eo amin’ny PPP raha oharina amin’ireo firenena Afrikanina.